खसीबोका किन्दै हुनुहन्छ ? सिङको रङ हेरेर मात्रै किन्न महानगरको आग्रह – BikashNews
खसीबोका किन्दै हुनुहन्छ ? सिङको रङ हेरेर मात्रै किन्न महानगरको आग्रह
२०७७ कार्तिक १ गते १३:१२ विकासन्युज
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वस्थ खसीबोका चिनेर मात्रै खरिद गर्न उपभोक्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाका पशुसेवा महाशाखा प्रमुख डा.अवधेश झाले बजारमा आनुगमन गरी स्वस्थ र अस्वस्थ खसीबोका छुट्याइएकोले चिनेर मात्रै खरिद गर्न आग्रह गरेका हुन् ।